Tonga soa eto amin'ny Ningbo J & S Botanics Inc., araka izay naorina tamin'ny taona 1996, dia efa nitarika voajanahary koa omen'ny mpamatsy ny Herb, Bee Vokatra sy sakafo Supplements ao Shina, dia vokatra eken'ny ankamaroany KOSHER sy ECOCERT organika fanamarinana. J & S Botanics dia laharana ho Ningbo fambolena mitondra an'i Enterprise hatramin'ny 2009.
J & S Botanics Faritany Beilun distrika, Ningbo tanàna, dia tena mety ho an'ny ranomasina sy an-tanety ny fitaterana. Ny orinasa sy ny R & D Center manarona 2.400 hektara amin'ny fampiasam-bola ny $ 4,5 million.The fametrahana ny foto-drafitrasa sy ny dingana tsy fampindramam dia mafy GMP maso araka ny fitsipika. Ny isan-taona ny anana Output nalaina dia niakatra ho any 1000MT, manarona 100 entana, mafy isika amin'ny fikarohana entana vaovao.
Mba hahazoana antoka ny Optimization ho an'ny mpanamboatra teknika sy ny fitazonana ny asa ara-boajanahary ny vokatra, J & S Botanics Nampiasa PARIDE Dokotera avy any Italia, izay mitarika ny vondrona mpikaroka manao fanavaozana teknika ny fotoana rehetra. Ary J & S Botanics efa nanana mihoatra ny 7 Patents sy ny maro ny teknolojia manokana eto amin'izao tontolo izao nitarika ambaratonga. Ireo mandroso teknika manampy antsika foana ny fahamarinan-toerana famokarana, hanatsarana ny miasa fahombiazana, ka ento midina ny vidiny, noho izany fanalehibiazana ny soa ho an'ny mpanjifa.
Efa ho ny vokatra rehetra dia ho an'ny fanondranana. Ny tsena lehibe indrindra any Azia Atsimo Atsinanana dia ahitana firenena, ny Afovoany-Atsinanana, Espaina, Alemaina, Frantsa, Soisa, Japana, Etazonia, Aostralia, Afrika Atsimo sy ny faritra Taiwan. Manantena ny hanorina lava tern fiaraha-miasa aminareo, raha misy fanadihadiana, Aza misalasala dia aoka isika mahalala.